Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxyadii Maanta ka Dhacay Muqdisho. | Awdalmedia.com
Al-Shabaab ayaa sheegtay iney ka dambeysay labo qarax oo maanta ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama oo ah jidka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho.
War Al-shabaab ay soo saartay ayey ku sheegtay in qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu weeraray goob ay fadhiistaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliska, kuwa nabad sugida iyo shaqaale ka tirsan DF oo ku taalla afaafka hore ee saldhigga degmada Waaberi sida ay warka u dhigeen.
Al-Shabaab ayaa intaas ku dartay in qaraxaas ay ku dhinteen qaar ka mid ah Saraakiisha ciidamada dowlada ee goobtaas ku sugnaa halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Booliska dowlada Somalia ayaa sheegay in afar qof oo shacab ah ay ku naf waayeen qaraxii galabta halka 5 kalena ay ku dhaawaceen, hase ahaatee ilo ka madax banaan labada dhinac ayaa sheegaya in ku dhowaad 10 ruux ay ku dhinteen qaraxaas halka 15 kalena ay ku dhaawaceemn kuwaasoo intooda badan shacab ahaa.
Sidoo kale, Al-shabaab ayaa sheegtay iney ka dambeysay qarax saaka ka dhacay isla wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan agagaarka Hotela Mubaarak kaasoo gaarigiisa loogu xiray taliyaha Nabad Sugidda Maamulka Galmudug inkastoo uu ka badbaaday.